Nayanraj Pandey | Online Sahitya
Read more about जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे
निदाएँ जगदम्बा / नयनराज पाण्डे
उनलाई अचेल राम्ररी निद्रा पर्दैन। अनिद्राका रोगी भएका छन्। सुरुसुरुमा त उनले आफ्नो अनिद्रालाई सामान्य रूपमा लिएका थिए। तर पछि उनलाई यसले निकै दुःख देला जस्तो लाग्न थाल्यो। एक त राजनीति गर्ने मान्छे। त्यसै पनि सधैँ तनावग्रस्त, सधैँ चिन्ताग्रस्त भइरहनुपर्ने। आराम भनेको त्यही राति निदाउँदासम्मको हो। तर त्यही निद्रा नै हराएपछि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने नै भयो। यो कुरा उनले धेरैसम्म कसैलाई भनेका थिएनन्। साह्रै भएपछि एक दिन उनले आफ्नी श्रीमती जगदम्बालाई भने ‘जगदम्बा ! अचेल मलाई निद्रा पर्दैन।‘
Read more about निदाएँ जगदम्बा / नयनराज पाण्डे
Read more about रेड वाइन / नयनराज पाण्डे
यो कथा इतिहासमा कतै पनि लेखिएको छैन । तर, यसका पात्रहरु अझै पनि जीवित छन् । दुर्भाग्य ! तिनीहरु यस कथाको सत्यताको साक्षी बस्न तयार छैनन् ।
Read more about मृत्युशय्यामा युधिष्ठिर / नयनराज पाण्डे
Subscribe to Nayanraj Pandey